News - ရိုက်ချက်ပေါက်ကွဲမှု၏ထိရောက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်မှန်ကန်သောပွန်းပဲ့မှုကိုသင်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသလား။
ဗုံးပေါက်ကွဲမှုသတ္တုမျက်နှာပြင်ကုသမှုတစ်ခုဘုံဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကိုသတ္တုများပုံနှိပ်ခြင်း၊ သံမဏိ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအရာများ၊ သတ္တုထုတ်လုပ်သည့်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတိုးတက်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှု၏အားကောင်းသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မျက်နှာပြင်သန့်စင်မှုအရည်အသွေး၊ ထုတ်ကုန်၏နောက်ဆုံးမျက်နှာပြင်အရည်အသွေးနှင့်တန်ဖိုးနှင့်သက်ဆိုင်သောကြောင့်၎င်းသည် ပို၍ ပို၍ အာရုံစိုက်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။
efficiency ၏ထိရောက်မှုကိုသက်ရောက်စေသောအဓိကအချက်များ သေနတ်ဒဏ်ရာ:
1. ရိုက်ချက်ပေါက်ကွဲမှုအတွက်အသုံးပြုသောပွန်းစားခြင်း၏အရည်အသွေး - ပွန်းစားခြင်း၏အမျိုးအစား၊ အချိုးအစား၊ စွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်း (မာကျောမှု၊ ပင်ပန်းမှုသက်တမ်း) စသည်တို့ဖြစ်သည်။
၂။ ရိုက်ချက်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု - ပစ်ခတ်မှုမှုတ်သွင်းချိန်၊ အမြန်နှုန်း၊ စီးဆင်းမှုစသည်တို့။
၃။ shot blasting machine ၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု - ရိုက်ချက်ထောင့်၊ ခွဲခြာမှုအခြေအနေ၊ ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုစသဖြင့်။
အသုံးပြုသူများသည်စျေးနှုန်းချိုသာပြီးအရည်အသွေးနိမ့်သောပွန်းပဲ့ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်မှာနာကျင်သောသင်ခန်းစာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ယူနစ်ဈေးနှုန်းမှယွမ်ရာထောင်ချီ။ စျေးသက်သာသည်။ သို့သော်ရိုက်ချက်ပေါက်ကွဲမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုလျှော့ချခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောကုန်ကျစရိတ်များသည်ဤပမာဏထက်များစွာပိုနေပြီး ၀ န်ဆောင်မှုနိမ့်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်သင့်သည်။
ဒီလမ်းကြောင်းသစ်ကိုကြည့်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောပွန်းပဲ့ဆေးအမျိုးအစားအသစ်ကိုအောင်မြင်စွာတီထွင်နိုင်ခဲ့သည်။ အနိမ့်ကာဗွန်ရောနှောပွန်းစားခြင်း（ကာဗွန်နိမ့်သံမဏိရိုက်ချက်）- ၎င်းသည်စက်ရုံများအားကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချရန်နှင့်ထိရောက်မှုတိုးမြှင့်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုအောင်မြင်စေရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကူအညီဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကျွမ်းကျင်သောနည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုအဖွဲ့ရှိသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုအတွေ့အကြုံနှင့်အတူပေါင်းစပ်ထားသောပွန်းစားသောအမှုန်များ၏အချိုးအစားကိုချိန်ညှိခြင်းနှင့်သေနတ်ဖြင့်ပေါက်ကွဲစေသည့်စက်ကိရိယာပစ္စည်း parameters များကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ရိုက်ကူးခြင်း၏ထိရောက်မှုကိုထိရောက်စွာမြှင့်တင်ခြင်း၊ ရိုက်ချက်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဆုံးရှုံးမှုများကိုအမြတ်အစွန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်နှင့်ထိရောက်မှုတိုးမြှင့်စေရန်အောင်မြင်စွာကူညီခြင်း။
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ထုတ်ကုန်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် shot blasting technology ၏သုတေသနကိုအာရုံစိုက်ပြီးကုမ္ပဏီ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုအနေဖြင့်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပတွင်လူသိများသော shot shot blasting ကျွမ်းကျင်သူများကိုခန့်ထားခြင်း၊ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဖောက်သည်များအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုနှင့် shot blasting application အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ သုတေသနပြုခြင်းနှင့်ပွန်းစားခြင်းထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာမှကုန်ပစ္စည်းလျှောက်လွှာနည်းပညာအထိလုပ်ငန်းခွင်အသုံးပြုမှုနည်းပညာအထိအာရုံစိုက်ပါ။
အင်ဂျင်နီယာဆိုဒ်ကိုခြေရာခံကဒ်လုပ်ပြီးနောက်သုံးစွဲသူ၏ ၀ န်ဆောင်မှုအသေးစိတ်ကိုကူညီလမ်းညွှန်ပါ။
၁။ shot blasting abrasives များကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်း၏စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ပြီးတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပါ။
2. သန့်စင်ပြီးစီမံခန့်ခွဲမှု (ပွန်းစားခြင်း၏ရောနှောမှုအချိုး၏ဒစ်ဂျစ်တယ်မော်ဒယ်လ်) ။
ထိရောက်သောပွန်းစားခြင်းရောစပ်ခြင်းသည်ကြီးမားသော၊ အလတ်စားနှင့်အမှုန်ငယ်များကိုမျှတစွာဖြန့်ဖြူးခြင်းပါဝင်သည်။ workpiece ၏မျက်နှာပြင်အပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲသက်ရောက်မှုကြောင့်ပွန်းစားသောယိုယွင်းပျက်စီးမှုကြောင့်ဖြန့်ဝေမှုအဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲသွားသည်။ သက်တမ်းတိုသောပွန်းပဲ့ပစ္စည်းများအတွက်စနစ်သည်၎င်းတို့လျင်မြန်စွာပြိုကွဲခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခြင်းတို့ကြောင့်သင့်လျော်သောဟန်ချက်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ခက်ခဲသည်။ အရွယ်အစားဖြန့်ဖြူးမှု၌ဤအတက်အကျသည်မျက်နှာပြင်အချောနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်သည်။
ရိုက်ချက်ပေါက်ကွဲမှုကိုစက္ကန့် ၉၀ မှ ၈၀ စက္ကန့်အထိလျှော့ချပြီးထိရောက်မှုကို ၁၀% ကျော်ပိုစေသည်။
များစွာသောရိုက်ချက်ပေါက်ကွဲမှုဆိုဒ်များသည်ပွန်းစားသောအသုံးပြုမှုနှင့်ရိုက်ခတ်မှုကိုပြုလုပ်သောညှိနှိုင်းမှုတွင်ကျွမ်းကျင်မှုအပြည့်အ ၀ မရှိကြပါ။ သို့မဟုတ်ပါကကောင်းမွန်သောစီမံခန့်ခွဲမှု၏လိုအပ်ချက်များကိုမပြည့်မီသေးသောကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည် (သို့) အားသာချက်များကိုထိထိရောက်ရောက်ရိုက်ကူးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
ယှဉ်ပြိုင်မှုပိုမိုများပြားလာသောစျေးကွက်စီးပွားရေးအခြေအနေတွင်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများသည်ထုတ်လုပ်မှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုစီ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက်စိုးရိမ်ကြသည်။ အဓိကအားဖြင့်ကုန်ကြမ်းများ၊ ကုန်ကြမ်းများ၊ အရည်ပျော်မှု၊ ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်အထွက်နှုန်းစသည့်အဓိကချိတ်ဆက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့စိုးရိမ်နေကြသည်ဖြစ်ရာရိုက်နှက်ပေါက်ကွဲမှုသန့်ရှင်းရေးကို ပို၍ အာရုံစိုက်သင့်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောပွန်းပဲ့ပစ္စည်းများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပစ်ခတ်မှုအားရှင်းလင်းသောနည်းပညာပံ့ပိုးမှုရွေးချယ်ခြင်းသည်သန့်ရှင်းရေးစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်အဆင်ပြေဆုံးနည်းလမ်းမှာဤပြောင်းလဲမှုသည်လျှောက်လွှာနည်းပညာကိုမြှင့်တင်ပေးလိမ့်မည်။သေနတ်ဒဏ်ရာ နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုထိန်းချုပ်၏တိုးတက်မှု!
TAA ထုတ်ကုန် သံမဏိရိုက်ချက်,သံမဏိ grit,သံမဏိရိုက်ချက် bearing,သံမဏိဖြတ်ဝါယာကြိုး,သံမဏိ grit,ကာဗွန်သံမဏိဖြတ်ဝါယာကြိုး, ရေမြှုပ်မီဒီယာပွန်းစား,လူမီနီယံဖြတ်ဝါယာကြိုး, သွပ်ဖြတ်ဝါယာကြိုး, ကြေးနီဖြတ်ဝါယာကြိုး,ဒါပေါ်မှာအပေါ် granet နှင့်.
TAA ရဲ့ ပေါက်ကွဲမှုစက် & အပိုပစ္စည်းဖောက်သည်ပေါက်ကွဲမှု application များအတွက်တစ်နေရာတည်းမှာစျေးဝယ်အောင်မြင်ရန်ကူညီနိုင်သည်!